‘खल्तीको रकम ब्यांकिङ प्रणालीमा ल्याउँदैछौं’
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, आषाढ १९, २०७४
५ असारमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) लाइसेन्स प्राप्त एफवान सफ्ट (ई–सेवा फोन पे) का अध्यक्ष विश्वास ढकाल भन्छन्, “मोबाइल वालेटको प्रयोगले पैसा सुरक्षित मात्र हुने होइन, समय पनि बचत हुन्छ ।”
‘मोबाइल वालेट’ भनेको के हो ?
तपाईं हामीले बोक्ने भौतिक पर्सको डिजिटल स्वरुप नै मोबाइल वालेट हो । भर्चुअल खातामा जम्मा भएको रकम आवश्यकता अनुसार सजिलै खर्च गर्न सकिन्छ । यसमा मोबाइल फोन नम्बर खाता नम्बरको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।
यसबाट के के फाइदा हुन्छ ?
खानेपानी, बिजुली आदिको बिल भुक्तानी गर्दा होस् वा सिनेमाको टिकट खरीद गर्दा लामो लाइन नबस्ने को होला ? ‘मोबाइल वालेट’ भएपछि यस्तो लाइनको झन्झट गर्नुपर्दैन । अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । पर्स जस्तो पाकेटमारले चोर्ने सम्भावना पनि रहँदैन । मोबाइल सेट हरायो वा बिग्रियो भने पनि ‘मोबाइल वालेट’ मा राखेको रकम सुरक्षित हुन्छ ।
तर भर्चुअल वल्र्डमा पनि त ह्याकिङ, भाइरस आक्रमण जस्ता जोखिम छन् नि !
हाम्रो कम्पनीमार्फत दैनिक रु.२ लाख जतिको कारोबार हुन्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो दुरुपयोगको एउटा पनि घटना भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने र अद्यावधिक भर्सनको प्रविधि प्रयोग गरेपछि तपाईंले भन्नु भए जस्तो जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
पीएसपी लाइसेन्स ढिलो लिनुको कारण के हो ?
‘फोन पे’ सँग सम्बन्धित ठ्याक्कै कानून नबने पनि हामीले प्रचलित अन्य कानूनको दायरामा रहेरै काम गर्दै आएका थियौं । अहिले कानून आएलगत्तै लाइसेन्स लियौं ।
‘मोबाइल वालेट’ ले अर्थतन्त्रमा के टेवा दिन्छ ?
माथि चर्चा गरे जस्तो हजारौं मान्छे बिल तिर्न घण्टौं लाइन बस्नु नपरेपछि स्वाभाविक रुपमा त्यो समय उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकियो । इन्धन खपत पनि कम हुने र ट्राफिक जाममा पनि फस्नु नपर्ने भयो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण हाम्रो खल्तीमा रहेको रकम ब्यांकिङ सिस्टममा आउँछ । जस्तो रु.१ हजार खल्तीमा बोक्ने ५० लाख जनाले ‘मोबाइल वालेट’ प्रयोग गर्ने हो भने एकैचोटि रु.५ अर्ब ब्यांकिङ सिस्टममा आउँछ ।